Kumberi Casters Wiricheya kumberi mavhiri uye OEM | Karman Kutsiva
×	 C51LT	1 × $49.99
musha / Wiricheya Kudzosera Zvikamu / Mberi Casters
View ngoro "C51LT" yakawedzerwa kungoro yako.
Wiricheya Casters yewiricheya vese OEM uye kutsiva
Iko kazhinji kune akawanda marudzi e Wiricheya Casters anowanikwa. Mazhinji acho ndeepasi rese uye anogona kushandiswa kune akawanda mabhureki uye mamodheru. Dzimwe nguva wiricheya inouya navo kuitira kuti iwe ugone kuishandisa kunze kwebhokisi. Paunenge uchitenga wiricheya, kazhinji kazhinji sarudzo yakanaka kutenga neiyo inouya nayo kunze kwebhokisi.
Nekuti haisi "yakachipa" kazhinji chinhu vanhu vanofunga nezvekutenga mushure mekunge vaine wiricheya. Asi yakakosha kwazvo. Kana uchikwira rampu, chikomo, kana bundu, zvinowanzo kukosha kuti wiricheya yako yakachengeteka uye kuti "isazoregedze" pamusoro. Ichi chikonzero nei kutsiva chairo Wheelchair Casters kwakakosha. Ita shuwa iwe unotisheedza isu kuti tiwane chairo Wheelchair Casters kune chako chigaro kana kutsiva.
Kuwana chaiyo Front Casters yewiricheya yako
Chikonzero nei kuwana chaiyo chaiyo yewiricheya yako kwakakosha. Chigaro chega chega chakagadzirwa zvakasiyana. Iyo nzvimbo yegiravhiti, kukwirira kwemasekisi, chigaro kusvika pasi pasi. Ivo vese vakasiyana. Kungoita kuti iwe unokwana imwe mukati, hazvireve kuti "yakagadzirirwa" chigaro chako uye ichiri kugona kuramba isina kuchengetedzeka. Mazhinji anogadzira anogona kuchinja saizi yehubhu kuitira kuti iyo "isiriyo" isakwanise. Izvi zvakaita senzira yekuchengetedza yakavakirwa mukati. Zvakafanana nepulagi yemagetsi. Kune akasiyana maumbirwo uye saizi uye zvakakosha kuti usazvisanganisa.
Asi usazvidya moyo, tauya kuzobatsira. Ingo fona, mameseji, kana email isu uye tipe iwe yako yemhando nhamba uye serial nhamba. Tichakwanisa kukupa iyo chaiyo anti-tipper iwe yauri kutsvaga. Sezvauri kuona, kuwana chaiko Wiricheya Casters yewiricheya yako yakakosha zvakanyanya.